og Siderodromophobia | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > og Siderodromophobia
Safrida noqon kartaa daweynta qaar ka mid ah; halka isla ay u horseedi karto cuqdad badan kuwa kale. People who like traveling will probably even looking at their tareen jaale kursiga safarka iyo in la hubiyo in ay u safraan.
Waa maxay Siderodromophobia?
Inta badan Socdaalba fiirin karo online wixii ay jaale kursiga tareenka; halka qaar kalena ay jecel yihiin oo kaliya socday la socodka iyo ku mudan tareen jaale kursiga sameeyey sida iyo marka loo baahan yahay waxay ku xiran tahay meesha ay ku xiga socday. Sidoo kale waxaa jira cabsi-cuqdadeedka la xiriira tareenada in dadka qaar ay dhibaatadu ka. ka cabsashadiisu tareenada loo yaqaan Siderodromophobia. Siderodromophobia waa erey aad u ballaadhan oo daboolaysa oo dhan cabsi ama cabsi-cuqdadeedka la xiriira tareenada. nooca ugu weyn ee dadka in cuqdad this inta badan ku aaddan tahay cabsi ah in dadka ay leeyihiin of is burburtay ama aadan in gacanta. Kale oo aan ahayn this, waxaa jira cabsi ah in aad imaneysaa marka qof ayaa ku tareenka. Waxaa jiri doona cabsi ah in cuqdad jeermiga, cuqdadeedka bulshada ama xataa cagajugleynta.
Siderodromophobia ku salaysan yahay in cabsida badan oo kala duwan. dheeraad ah, ku xiran tahay sida ay u daran xaalada waa. Waxaa laga yaabaa in calaamadaha sida wadno, dhidid, shaking or gastrointestinal symptoms. Dadka qaarkood, shuruudaha bilaabi laga yaabaa xataa muddo dheer ka hor safar tareen bilaabo. Tani waxay badanaa ka hadlaya waxa aan ognahay in walaaca sida saadaalin. walaaca saadaalin waxay sababi kartaa dhibaatooyinka ka xun-cuqdadeedka dhabta ah laftiisa. Inta badan sababaha cabsida la xidhiidha waayo-aragnimo xun in qofka ayaa wajahay, kaas oo la meel la xiriira tareenada. Waxaa loo baahan yahay in la fahmo in halkan xun waayo-aragnimo in ay ku xiran tahay maskaxdaada daruuri ma aha in ay noqon wax kugu dhacay. Waxa kale oo ay noqon kartaa wax ku dhacay laga yaabaa in qof kale ama wax aannu aragnay laga yaabaa nagu wareegsan labada qof ama warbaahinta.
Dhammaadka maalinta, ma ahan muhiim ah in cabsida jirta; waxa arrimaha waa sida aad ula qabsan lahayd cabsida iyo dadaal dheeraad ah sameeyaan si ay uga takhalusi cabsi ah in uu sameeyay meel aad noloshaada. Of cuqdadeedka oo dhan, Siderodromophobia ama tareenka cuqdadeedka waa mid aad u fudud u bogsado ayaa muujisay heerka guusha u fiican, markii loola dhaqmo. Si aad uga takhalusi cuqdad ah, tallaabooyinka ay u baahan yihiin in la qaado, haddii marka hore ka shaqeeyaan takhalusaya wax fikrado xun xun iyo tan iyo tareenada ka walwalsan. Sidoo kale, qofka la cabsi-cuqdadeedka ay u baahan doonaan in ay ka shaqeeyaan beddelo dabeecadaha isaga ama iyada la xiriira tareenada. Dhammaadka maalinta ay wax waa raagaya iyo la hagaajin karaa iyada oo daryeel ku haboon iyo daaweynta.
Leave your fear behind and Order tababartay tigidhada ka Save A tareenka
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fknowing-siderodromophobia%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#siderodromophobia tareenada Talooyin safarka tareenka travelfear